Somaliland oo ka hadashay dilka la sheegay in Mareykanku u geystay madaxii Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 6 September 2014 7 September 2014
Mareeg.com: Wasiirka Arimaha Gudaha Somaliland Cali Maxamed Warancadde oo Maanta ka hadlay dilka Maraykanku sheegay ee Hogaamiyihii AL-shabaab Axmed Cabdi Godane, ayaa sheegay in Xukumadda Somaliland ka taagan tahay geerida Godane meesha dunidu ka taagan tahay.
Cali Maxamed Warancadde ayaa ku tilmaamay hogaamiyahaAlshabaab Nin daallin ahaa oo la dilay. Axmed Godane waxa maxkamad ku taalla Somaliland ku xukuntay dil isagoo maqan.
“Dilka hogaamiyihii Al-shabaab halkaa Caalamku ka taagan yahay ayaanu ka taagan-nahay, Waxaana lagula jiray dagaal, haddii Ninku dagaal ku jirana kolay dhimasho iyo geeri labadaba diyaar buu u yahay, Nin Walba oo daallin ahna in la dilaa xaq weeye” ayuu yiri Wasiir Warancadde.
Hogaamiyaha Al-shabaab ee Axmed Cabdi Godane, ayaa ka soo jeeda Somaliland, hase ahaatee waxay Somaliland ku xukuntay dil isagoo maqan lugtii uu ku lahaa weeraradii qaraxyada ahaa ee 2009-kii Somaliland ka dhacay darteed, kuwaasoo lala beegsaday xarrunta madaxtooyada, xarrunta UNDP iyo xarrun Itoobiya ku laheyd Hargeysa.
Maraykanka ayaa shalay sheegay in Axmed Cabdi Godane dhintay ka dib weerar ay kula beegsadeen Isniintii meel u dhaw degmada Baraawe ee gobolka Shabellaha Hoose.
Waxaa xusid mudan in Alshabaab aysan xaqiijin ama beenin dilka Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya sheegeen in loo geystay hogaamiyahoodii sare Abuu Zubeyr.
Diyaarad rakaab ah oo ku burburtay garoonka diyaaradaha Muqdisho